‘प्रेम गीत ३’ मा छानिएकी क्रिष्टिना भन्छिन्- अब पढाइ र अभिनय सँगसँगै लैजान्छु | latestnepali.com
‘प्रेम गीत ३’ मा छानिएकी क्रिष्टिना भन्छिन्- अब पढाइ र अभिनय सँगसँगै लैजान्छु
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ मा क्रिष्टिना गुरुङ नायिकाका रुपमा छनोटमा परेपछि उनको चर्चा हुन थालेको छ । छेतेन गुरुङ र सन्तोष सेनले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा प्रदीप खड्का, मनिष राउत, सुनील थापा, शिव श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको समेत भूमिका रहनेछ ।
२७ सय प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै नायिकामा चुनिएकी क्रिष्टिनाले अमेरिकाको बाल्टीमोरमा ‘इन्फरमेसन सिस्टम’ विषय लिएर अध्ययन गरिरहेकी थिइन् । प्लस २ पछि थप अध्ययनका लागि अमेरिका गएकी क्रिष्टिना आमा बिरामी परेका कारण नेपाल आउने जाने गरिरहन्थिन् ।
अमेरिकामा रहे पनि नेपालमै भविष्यको खोजी गरेकी क्रिष्टिनाले अब नायिकाको परिचय बनाउँदै छिन् ।
सानैदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चासो राख्ने क्रिष्टिना विदेशमा हुँदा झनै बढी नेपाली चलचित्र क्षेत्रप्रति चासो बढेको धारणा राख्छिन् । यसैबीच हामीले ‘प्रेम गीत ३’ की ‘गीत’ लाई तपाईंलाई छनोटमा पर्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वास थियो? भनेर सोधेका छौः
म नै छानिन्छु झैँ त लागेको थिएन तर यो चलचित्रमा अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो ।
अचानक फिल्ममा छानिँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ?
एकदमै खुशी छु । खुशीको सीमा छैन । पहिलेदेखि नै यो क्षेत्रमा । केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । यो ब्यानरका बारेमा पहिलेदेखि नै थाहा थियो ।
अमेरिकादेखि नेपाल आउनुभएको छ, नेपाली फिल्मको अवस्थाबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
खासमा म व्यक्तिगत कारणले अमेरिकाबाट नेपाल आएकी थिएँ । फिल्मको अडिसन हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि यतै अडिसन दिने सोचेँ । नेपालमै केही गर्नु छ भनेर मौका खोजिरहेकी थिएँ । विदेशमा हुँदा नेपाली फिल्म र नेपालबारे अझै चासो हुने रहेछ । नेपालबारे अपडेटमा रहन्थेँ ।
उत्कृष्ट २५ मा छानिएपछि म नै छनोटमा पर्छु भन्ने विश्वास थियो ?
त्यसपछि मलाई कसरी राम्रो गर्छु भन्नेमा मात्र ध्यान थियो । जे होस्, राम्रो भयो ।
अमेरिकामा अध्ययन गर्दै गर्दा एकाएक चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभयो, अब कुनलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
मैले अमेरिकामा ‘इन्फरमेसन सिस्टम’ पढिरहेकी थिएँ । अब चलचित्र क्षेत्रमा पनि हुन्छु । दुवैलाई मिलाएर अगाडि बढाउन चाहन्छु । अहिले चाहिँ ‘प्रेम गीत ३’ मै फोकस हुन्छु ।
दलित समुदायबाट पहिलो पटक गरे दुई जनाले गरे विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण